Aqoonkaab Faaidooyinka caafimaad ee Ukunta (Beedka) | Aqoonkaab
May 25, 2016Caafimaadka
Waxaa jira dad badan oo neceb ama ka taxadara cunista Ukunta ama beedka maadaama elerjik ku qabaan balse waxaa jira faa’iido wayn oo ukunta ama beedka laga helo.
halkan ka akhriso qaar ka mida faaidooyinka caafimaad ee beedka ama ukunta
1. Protien wanaagsan, Ukunta waxaa ku jira amino acid,kaasoo jirkaagu uga baahan yahay heer aad u sareeya oo awood ah,waxaa kale oo ku jira vitamins B12,kaasoo in badan ka caawiya murqaha iney isku soo ururaan.
2.Waxey ka caawisaa koritaanka maskaxda,maadada cholina oo ah nafaqo laga helo ukunta,Ukun kasta Dusheeda waxaa ku wareegsan 300 oo micrograms ah,nafaqadaas waxey si joogta ah u caawisaa maskaxda,habdhiska dareenka iyo murqaha habdhiska wadnaha.
3.Waxey gacan ka geysataa dhimista miisaanka: ukunta waxaa ku jirta nafaqooyin muhiim ah,sidaadarteed cunida ukunta quraacda waxey kaa caawin kartaa iney xadido si joogta ah ugu gudba jirka.
4.Waxey kaa caawineysaa iney ka hortagto cudurka kanserka ah: daraasad cusub ayaa soo jeedisay in joogteynta cunista ukunta ay ka hortagto cudurka Cancerka. Tijaabo la xajiiyey ayaa muujisay in haweenka cuna ukunta todobaadkii lix jeer iney hoos u dhigto qatarta cudurka Cancerka.
5.Waxey difaacdaa awooda araga: ukunta waxaa ku jirto Leutin iyo Zeaxanthin, Maadama antioxidant taasoo ka gaashaanta indhaha dhibaatooyinka la xiriira UV.
Previous PostMuhimada caafimaad ee Rumaanka Next Post6-Qodob Oo Aad Ku Baran Doontid Xikmado Noloshaada Muhiim U ah
2 thoughts on “Faaidooyinka caafimaad ee Ukunta (Beedka)”
cabdi kooshin January 9, 2018 at 11:30 am
thanku so much for your lesson i know many things in my diet problems
Abdullaahi mohamed farah December 7, 2018 at 5:45 pm
masha aalah wuu i an faca eaana ku maa san tihiin asxaabats